Turkiga oo ay ka bilaabatay moowjad shisheeye nacayb ah & dalalka diiradda la saarayo (Erdogan oo laftiisu is bedeley & sababta?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Turkiga oo ay ka bilaabatay moowjad shisheeye nacayb ah & dalalka diiradda...
Turkiga oo ay ka bilaabatay moowjad shisheeye nacayb ah & dalalka diiradda la saarayo (Erdogan oo laftiisu is bedeley & sababta?)
(Ankara) 02 Dis 2021 – Markii Ajmal Walizada uu booqday beer lagu nasto oo ku taal xaafadda Zeytinburnu ee magaalada Istanbul bishii hore, halkii uu galab nasasho la qaadan lahaa ehelkiisa, 24-jirka reer Afgaanistaan waa la dhibay ilaa ay isaga iyo qoyskiisu go’aansadeen inay baxaan.
“Koox Turki ah ayaa noo yimid oo nagu yiri: “Dalkaagii ku noqda, halkan ayaad wasakh ka dhigteen,” ayay tiri Walizada, oo ku nool meel u dhow guri ay laba qoys wadaagaan. “Waddooyinka, waxay noogu yeeraan ajaanib waxayna na siiyaan eegmo wasakhaysan. Aad bay u adag tahay. Mid ka mid ah dadka Afgaanistaan ​​ayay xitaa Turkidu ku garaaceen beertaas dhowaan.” ayay raacisay.
Bishii Luulyo, Kemal Kılıcdaroglu, oo ah guddoomiyaha xisbiga ugu wayn mucaaradka ee Xisbiga Jamhuuriga (CHP), ayaa sheegay in haddii la doorto, “Turkigu uu macsalaamayn doono martidooda Suuriyaaanka ah oo uu u diri doono guryahooda laba sano gudahood”.
Meelaha qaar mucaaradku waxayba qaadeen tillaabooyin adag. Tanju Ozcan, barasaabka gobolka waqooyiga dhaca ee Bolu, ayaa soo jeediyay mooshin lagu kordhinayo toban-laab biilasha biyaha dadka “shisheeyaha ah”, iyo in sare loo qaado kharashka guurka. Sharcigan ayaa la ansixiyay bishii Nofeembar iyadoo ay ansixiyeen kooxda Isbaheysiga Qaranka, oo ka kooban CHP iyo Xisbiga Wanaagga (IP).
ISBADBAADINTA ERDOGAN – Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka (AKP) ee xilka haya ayaa hadda wajahaya rajo aad u weyn oo ah in looga guulaysto doorashada June 2023, sida ay qabaan falanqeeyayaasha siyaasadda, iyo in amni-xumada, ay oggolaatay kala qaybsanaan weyn oo ku saabsan mowduuca kulul. ee qaxootiga.
“Madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu si adag u eego qaxootiga” ayuu tiri Asli Aydintasbaas, oo ka tirsan Golaha Yurub ee Xiriirka Dibadda.
“Erdogan waxa uu marayaa marxaladdii ugu nugulayd ee noloshiisa siyaasadeed – taageeradiisa oo aad u hooseeysa iyo dhaqaale xumo,” ayay tiri Asli Aydintasbas, oo ah xubin sare oo ka tirsan Golaha Yurub ee Xiriirka Dibadda.
“Turkiga waxa uu lahaa siyaasad albaabadu u furan tahay dhanka qaxootiga. Laakiin jawiga siyaasadeed si wayn ayuu isu bedelay, waxa uu dareemaya in siyaasadda qaxootigu ay keentay hoos u dhac wayn oo saameeyay ra’yul caamka. Madaxweynaha waxa uu rabaa in uu si adag u eego qaxootiga.” ayay ku doodday.
Ra’yi ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in taageerada Erdogan ay hoos uga dhacay halkii ugu sarreysay ee ay gaartey 68% 2016-kii ilaa heerkii ugu hooseeyay abid oo ah 38% bishii Nofeembar. Xisbiga AKP iyo isbahaysigiisa, xisbiga Dhaqdhaqaaqa Wadaniga ah ee garabka midig, ayaa codbixintu ka hoosaysaa boqolkiiba 40, iyadoo CHP, xisbiga Dimuqraadiga Shacabka ee Kurdish (HDP), Xisbiga IYI, iyo mucaaradka xulafada ah, ay hadda leeyihiin aqlabiyad ku filan oo ay ku xukumi karaan baarlamaanka.
Inkastoo Erdogan uu difaacay qaabilaadda malaayiin qaxooti ah, hoos u dhaca taageeradan ayaa keentay in uu codkiisa si wayn u beddelo. “Turkigu… ma xamili karo culays kale oo qaxooti ah oo ka imaanaya Suuriya ama Afgaanistaan,” ayuu yiri Erdogan bishii Agoosto.
Waxa uu sidoo kale uga digay hogaamiyayaasha Midowga Yurub in Turkiga uusan noqon doonin “qayb loo adeegsado kaydinta muhaajiriinta” Afgaanistaan ​​​​kasoo cararaya ee isku dayaya inay galaan Midowga Yurub.
Soomaalida ayaa ka mid ah dadka iyaguna halkaa jooga, waloow aysan inta badan ku jirin xeryo qaxooti, mararka qaarna mucaaradka ayaa diiradda saara Soomaalida, waloow ay dhaamaan labada dal ee aannu soo sheegnay iyaga oo aad uga yar isna dabara darteed.
Previous articleMagaca Maxamed oo sanadkii 5-aad kaalinta 1-aad ka galay dal aan maamul ahaan Muslim ahayn
Next articleMaxay diintu ka qabtaa in dumarku ay meherkooda ka dhigaan in ninku aanu xaas kale la guursan?!!